Bursa Hızlı tren hattı google haritasına çarptı 447 milyon zarar | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaTareenka Baaskiilada ee Boosta ayaa ku dhuftay khariidadda google Google 447 million dhaawac ah
07 / 06 / 2016 16 Bursa, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Khadka tareenka xawaare sare leh ee Bursa wuxuu ku dhuftay google khariidad xNUMX milyan oo khasaare ah: Kiiloomitir 447 ee Bursa-Yenisehir 75 kiiloomitir oo tareenka xawaare sare leh ayaa beddeley kiiloomitir 50. Gobolka waxaa ku dhacay luminta 447 milyan ginni oo isbedel ah dartiis.
Kuxigeenka CHP Haydar Akar, "mashruuc lagu diyaariyay khariidadda Google", ayuu ku jawaab celiyay.
Fadeexadaha ku yimid hindiseyaasha Tareenka Xawaaraha Sare lama joojinayo. Wadada Bursa-Yenişehir YHT waxaa la badalay marar badan. Masaafada 75 kiiloo mitir ee 50 kilomitir ayaa dib loo dhisay maxaa yeelay harada, dhul-beereedka, aqalka dhirta lagu koriyo, dhisme iyo buur fuulay jaranjarooyinka hortiisa. Bilowga hindisada, 393 million TL waa la dallici doonaa oo xariiqu wuxuu gaadhay 870 milyan TL. Khasaaraha shacabka ayaa u booday xariiqda kiiloomitir ee 75, xitaa tan loo yaqaan '477 million TL'.
Xisaabaadka TCDD ee wada hadalada Golaha Baarlamaanka SOE waxay u yimaadeen ajandaha malyan dollar ee xaraashka Yuuj. Maxkamadda Xisaabaadka waxay soo bandhigtay warbixinno ku saabsan cilad-darrooyinka lagu tilmaamay khadkii Bursa-Yenişehir ee lagu soo kiraystay 2011. Waxay ka leexatay in fadeexadaha ay soo gudbisay Maxkamadda Xisaabaadka ee 2012 aan la weydiisanin inay la xisaabtamaan sanadaha 4. Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydınfadeexada wali waxaa baara Wasaarada Gaadiidka, ayuu yidhi.
5 PERCENT 30 PER YEAR
Isaga oo ka hadlaya fadeexada ka dhex dhacday Gudiga Barlamaanka ee KIT CHP kuxigeenka Haydar Akar, “Hal habeen qof maskaxdiisa ayaa soo gashay khadka Bursa-Yenisehir. Waxaan kuu sheegayaa inay dhex mareen mashruuc loogu diyaariyay qariirada Google. 393 milyan TL ayaa la kharash gareeyay illaa iyo hadda 560 milyan oo rodol. Kaliya hal boqolkiiba ee khadka kiloomitir ee 75 ayaa ku gaadhay horumar jireed 30, iyadoo 70 ay wali hoos u dhacayso. Masaafada 75 ee xariiqda kilomitir ee 50 ayaa isbeddelay. Dhanka kale 'haro ayaa jirta, halkan kuma dhex mari karno' waxay dhaheen, dhanka kale 'dhul baaxad leh, halkan kuma gudbi karno' ayay yiraahdeen.
Miyaanay jirin dhul dhul beereed kahor qandaraaska?
Ka dib markii la saxeexay heshiiska, Fahrettin Oğuz Tor, oo ah xubin MHP ah oo ka tirsan Komishanka SOE, ayaa ka falceliyay isbeddelka dariiqa kiiloomitir kiiloo mitir ee 75 kiiloo mitir. Isagoo sheegay in kharashyada la labanlaabay maxaa yeelay howlaha kaabayaasha lama qabanin kahor qandaraaska, Tor wuxuu yidhi, anigu garan maayo sida, laakiin ma ahan inay shaqeyso. Si kale haddii loo dhigo, sabab, caqli galku ma qaadan karo. Xariiqa mashruuca wuxuu maraa dhul beereed qiimo leh, geedo canab ah iyo geedo cagaaran, wuxuuna saameyn ku yeelanayaa qorshayaasha DSI ee shabakada biyaha cabitaanka ee 50 sanadlaha ah. Sow dhulkan iyo geedaha lagu koriyey miyaanay ahayn kuwii hore?
Ucuol - Saddexyuular mootada 200 Million dollar dhaawac ayaa dhacay
1 malaayiin lacageed ayaa ku dhaawacmay dabkii xarunta tareenka
50 kilomitir oo ah xariijin Bursa-Yenisehir YHT ayaa isbeddelay, waxyeelo waaweyn
Maanta taariikhda: 17 May 1972 Xawaaladaha Lacagta Khasaarada Lacagta 991 Million TL
Mashruuca Tram Akkaray wuxuu u guuraa Habboon